Miara-manao diabe ho an’ny fitovian-jo ireo mpikatroka LGBTQ Thailandey sy ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia · Global Voices teny Malagasy
Nambaran'izy ireo ihany koa ny fitakiana hanavaozana ny fitondram-panjaka Thailandey
Voadika ny 09 Desambra 2020 3:20 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Português, Español, Deutsch, English
Ireo mpanao fihetsiketsehana mitazona saina fireharehana goavana rehefa niroso nankany amin'ny lalana Silom ny diabe. Sary sy fanazavana avy amin'ny Prachatai
Ny lahatsoratra ôrizinaly dia navoaka tao amin'ny Prachatai, tranokalam-baovao tsy miankina any Thailandy, ary nasiam-panitsiana sy navoaka indray ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nanatevin-daharana ny diaben'ny Fireharehana tamin'ny 7 Novambra tao Bangkok ny vehivavy Thailandey, ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ, ary ireo mpanao fihetsiketsehana mpanohana ny demaokrasia hitaky ny fitovian-jo ho an'ny vondrona atao anjorom-bala rehetra, sy ny fialan'ny praiminisitra Gen Prayut Chan-o-cha, sy ny lalàm-panorenana vaovao ary ny fanavaozana ny fitondram-panjaka.
Nanomboka teo amin'ny fihaonan-dalan'i Samyan, afovoan'i Bangkok ny diabe nokarakarain'ny vondrona mpikatroka miralenta Seri Toey Plus sy ny Vehivavy ho an'ny Fahalalahana sy ny Demaokrasia. Nanao diabe nizotra ny làlana Rama IV ny mpanao fihetsiketsehana, alohan'ny nijanonany teo amin'ny Làlana Silom, tsangambato ao afovoan-tanàna sady nitondra saina avana lehibe maro sy sora-baventy mitaky ny miralenta, ny fitoviana amin'ny fanambadiana , ny zon'ny fanalan-jaza ary ny fanaovana ho ara-dalàna ny asa fivarotan-tena.
Vakio koa: Nahoana no manao fihetsiketsehana ny tanora ao Thailandy?
Nandritra ny diabe, ny vondrona Vehivavy ho an'ny Fahalalahana sy ny Demaokrasia, nampian'ny tarika mpiangaly amponga avy ao amin'ny vondrona teatira B-Floor dia nanao fampisehoana ny hira fanevan'ny feminista Shiliana “Ny Dian'ny Mpanolana” nadika ho amin'ny teny Thailandey ho fanoherana ny herisetra ara-nofo, ny fiampangana ny niharam-boina ary ny kolontsaina fanolanana.
Noforonin'ny vondrona feminista Shiliana Las Tesis tany am-boalohany ary nohiraina tamin'ny teny Espaniôla, nadika ary nohiraina nadritra ny hetsi-panoherana mitaky ny zon'ny vehivavy manerana izao tontolo izao ho fomba iray hilazana ny herisetra ara-nofo sy ny rafi-pahefan'izay mangeja ny vehivavy ity hira ity.
Nadikan'ny Vondrona Vehivavy ho an'ny Fahalalahana sy ny Demaokrasia ny dika amin'ny teny Thailandey. Milaza ny tononkira fa “ny fanjakana izay tsy mihaino ny feontsika no fanjakana manolana antsika”, ary nanonona ny “polisy, ny miaramila, ny fitsarana, ny firenena iray manontolo, ny mpanjaka” ho mpiray tsikombakomba amin'ny herisetra mifototra amin'ny miralenta izy ireo.
Mampiasa sary avy amin'ny tantara sanskrit fahiny Ramayana ihany koa ny dika amin'ny teny Thailandey, izay malaza ihany koa amin'ny kolontsaina Thailandey. Miresaka an'i Sita vadin'i Rama ny tantara, izay noteren'ny vadiny handeha hamaky afo hanaporofoana ny fahadiovany taorian'ny nahababo azy naharitra tamin'i Ravana izay rafilahin'i Rama.
Mpanao fihetsiketsehana tonga tao amin'ny fihaonan-dalana Saladaeng, nipetraka ary nanangana ny rantsan-tanana telo “Hunger Games” raha sady nohirain'ny mpitarika tao anaty kamiao nitarika azy ireo ny hiram-pirenena. Sary sy fanazavana avy amin'ny Prachatai
Nijanona teo ambanin'ny tobim-piarandalamby Saladaeng BTS Bangkok ny diabe, ary nampiasa ny kamiao nitarika ny diabe ireo mpanao fihetsiketsehana ho lampihazo hanaovana dihy sy kabary momba ny olana ara-tsosialy isankarazany, toy ny fanaovana ho ara-dalàna ny asa fivarotan-tena, ny zo hanala zaza, ny fanavakavahana mifototra amin'ny miralenta eo amin'ny sehatry ny STEM, ny herisetra ara-nofo atao amin'ny vehivavy mpikatroka, ny maha LGBTQ ao amin'ny vondrom-piarahamonina Miozolomana, ny vondrom-poko sy ny zon'ny mpifindra monina, ary ny rafi-pahefan'ny ray ao amin'ny fanjakana Thailandey. Nahitana fampisehoana nataon'ny vondrona drag queens ny hetsika .
Nampiaka-peo ihany koa ireo mpikatroka momba ny fanorisorenana ara-nofo ary niantso ny vehivavy sy ny olona LGBTQ mba hiakatra eny an-dapihazonny hetsika ary nitanisa ny fangatahana miisa telo ho an'ny hetsiky ny demaokrasia dia ny fialàn'i Gen Prayut, ny lalàmpanorenana vaovao ary ny fanavaozana ny fitondran'ny mpanjaka.
Mpikatroka mpiaro ny zon'ny LGBTQ sy mpiaro ny zon'ny mpivaro-tena, Sirisak Chaited, nitafy lamba famaohana niaraka tamin'ny hafatra hoe “tsy heloka ny asa fanaovana firaisana” mandritra ny diabe hitakiana ny hametrahana ho ara-dalàna ny asa fanaovana firaisana. Sary sy fanazavana avy amin'i Prachatai